Ahoana no hanaovana intramuscular tsindrona? Vonona hiasa Ny zavatra voalohany tokony ho takatrao dia ny fomba fanomanana ny tsindrona intramuscular. Ny tsindrona dia mihoatra noho ny manindrona fanjaitra amin'ny hena. Ity ambany ity dia hampiditra dingana vitsivitsy amin'ny tsindrona, izay toa be dia be, fa ...
OMS: Mahatratra 2 lavitrisa ny vaksiny na tsy fahampiana amin'ny 2022
Araka ny tranokalan'ny Shinoa Nikkei, ny OMS dia namoaka fampitandremana tamin'ny 9 Novambra fa hisy fara-tampony na tsy fahampian'ny 2 lavitrisa syringes vaksiny amin'ny taona 2022. Ny antony dia nitombo ny fangatahana vaksiny fanampiny amin'ny vaksiny satroboninahitra vaovao, ary ny Ny famokarana syringe dia tsy misy k...
Ny "Syringe" dia noforonina noho ny "Morphine"
nataon'ny admin tamin'ny 21-11-05
Mety tsy ho azonao an-tsaina fa tena natao ho an'ny morphine ny syringe ampiasaintsika ankehitriny. Ity tantara ity dia manomboka amin'ny opium. Avy amin'ny natiora ny opium. Nalaina tamina zavamaniry iray izy io. Ity zavamaniry ity dia antsoina hoe poppy. Ny voan'ny poppy dia afaka mamoaka tsiranoka fotsy. Rehefa maina ny ranony fotsy dia lasa opium. Raha ny marina, o...
Inona no atao hoe Robot Surgical?
Ny rafi-pandidiana robotika dia saro-pantarina izay mampiditra fomba maoderina maoderina maro. Manana fampiasa isan-karazany izy io ary manana fampiharana marobe amin'ny fandidiana klinika. Ny mpandidy dia afaka mampiasa milina lavitra ny latabatra fandidiana mba hanaovana fandidiana. Hafa tanteraka amin’ny...
Fampidirana ny fonon-kiraro ara-pitsaboana
nataon'ny admin tamin'ny 21-10-22
Ny tombony amin'ny saron-kiraro fitokana-monina ara-pitsaboana dia azo ampiasaina amin'ny faritra mitoka-monina amin'ny hopitaly sy efitrano fandidiana. Ny fonon-kiraro vita amin'ny sarimihetsika plastika dia tsy misy rivotra ary mora tapaka. Ny ambony dia ambany ary tsy afaka mametaka ny ba kiraro sy ny tongotry ny pataloha ho an'ny mpiasan'ny mpitsabo mba hampitokana ny kiraro. Na t...
Inona no maha samy hafa ny solomaso ara-pahasalamana sy ny solomaso tsotra?
Solomaso ara-pahasalamana, karazana solomaso fiarovana ampiasain’ny mpitsabo rehefa miasa. Afaka manakana ny fanafody na ny rà tsy hiparitaka amin’ny tarehy, ka miaro ny maso. Ity karazana solomaso ity dia matetika ampiasaina miaraka amin'ny saron-tava sy satroka fandidiana mba hiarovana tanteraka ny lohan'ny dokotera. [F...
Inona no atao hoe satroka medikaly
Ny satroka ara-pahasalamana dia fitaovana ara-pitsaboana ampiasaina amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana ara-pahasalamana ao amin'ny rafi-pitsaboana, ary ampiasaina amin'ny fitokanana ankapobeny any amin'ny toeram-pitsaboana, paroasy ary laboratoara amin'ny toeram-pitsaboana. Ny akora fototra Satroka ara-pahasalamana amin'ny ankapobeny dia mampiasa lamba tsy voatenona ho akora fototra, izay vita amin'ny...
Inona no atao hoe akanjo fiarovana ara-pitsaboana
Ny akanjo fiarovana ara-pahasalamana dia manondro ny akanjo fiarovana ampiasain'ny mpiasan'ny mpitsabo (dokotera, mpitsabo mpanampy, mpiasan'ny fahasalamam-bahoaka, mpiasa mpanadio, sns.) ary olona miditra amin'ny faritra ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana manokana (toy ny marary, mpitsidika hopitaly, mpiasa miditra amin'ny faritra voan'ny aretina, sns. ). Ny asany i...
Inona avy ireo fiasa manokana amin'ny fiarovan-tena ara-pahasalamana?
Miaraka amin'ny fihanaky ny COVID-19 eran'izao tontolo izao, ny fitaovam-piarovana isan-karazany dia nanana anjara toerana lehibe. Manomboka amin'ny saron-tava ara-pitsaboana ka hatramin'ny akanjo fiarovana ara-pitsaboana sy ny ampinga, ny fanakanana ny viriosy rehetra dia toa asa sarotra ho an'ny ankamaroan'ny olona. Anio aho dia hiditra...
2021 Global Medical Hotspot
nataon'ny admin tamin'ny 21-09-17
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, ny fanatontoloana dia mivoatra amin'ny lalana lalindalina kokoa sy mivelatra kokoa. Ny olona manerana izao tontolo izao dia manana fifanakalozam-bola akaiky kokoa, ny fiankinan-doha ara-toekarena eo amin'ny faritra, ary ny fizahan-tany iraisam-pirenena sy ny asa fandraharahana dia lasa matetika kokoa. Ny fanatontoloana mihaingan'ny...
Inona no maha samy hafa ny concentrator oksizenina ara-pitsaboana sy ny concentrator oksizenina ao an-tokantrano?
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, betsaka ny vokatra oksizenina concentrator niseho tao amin'ny indostrian'ny fikarakarana ara-pahasalamana, koa fantatrao ve ny fahasamihafana misy eo amin'ny concentrator oksizenina ara-pitsaboana sy ny concentrator oksizenina ao an-tokantrano? Satria misy karazany roa ny mpamokatra oksizenina eny an-tsena, ireo mpamokatra oksizenina ara-pitsaboana...
Inona no maha samy hafa ny fonon-tanana nitrile fanariana sy fonon-tanana latex fanariana?
Na fonon-tanana nitrile fanariana izany na fonon-tanana latex dia tena fahita amin'ny fiainana andavanandro sy ny asa. Raha ny bika aman'endriny dia toa tsy misy afa-tsy ny tsy fitoviana eo amin'ny roa tonta. Ny fonon-tanana nitrile dia manga amin'ny ankapobeny, fa ny fonon-tanana vita amin'ny latex kosa amin'ny ankapobeny dia fotsy ronono. Etsy andanin’izay, bo...